Shiinaha soosaarayaasha qeybiyeyaasha iyo alaableyda | KAIHUA
Xalka iyo sameynta caaryada loogu talagalay qashinka, sariirtaada, sanaadiiqda iwm. Inta badan wasakhahaasi waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha ku kala nool suuqa Yurub iyo Ameerika. Waqtigaan la joogo waxaan bixin karnaa culeys balaaran oo gaaraya ilaa 90T.
Waxaan awood u leenahay in aan sameysano wasakhda wasakhda u dhaxeysa 40L illaa 3200L. Khibrad hodan ah ayaan helnay sanadba sanadka ka dambeeya, caaryaheena waxay lahaan karaan waqti wareeg deg deg ah iyo nolol waqti dheer ah. Waxaan ku siin karnaa xalal wax lagu qaso oo loogu talagalay sanaadiiqda warshadaha iyo waliba sanaadiiqda waaweyn ee beeraha. Daraasad qoto dheer oo ku saabsan sida si fudud loogu beddelo noocyada, waxaan ka caawinnaa macmiilkeenna inuu badbaadiyo caaryada iyo qiimaha wax soo saarka. Macno malahan yar, sariir yar oo gacanta lagu qaato ama nadiif ah, sariir xasilan oo raashin ah, qeybta nadaafada. Qaababkeenna marwalba waxaa lagu dhisaa waqti wareegsan oo gaaban iyo sidoo kale isbeddel fudud. Dhanka kale, waxaan bixin karnaa adeeg loogu talagalay falanqaynta dhaqdhaqaaqa firfircoon iyo kan joogtada ah.
Tayo Sare (Qaab & Tayada Wax Soo Saarka)
Gaarsiinta Waqtiga-Gaarka ah (Sambalka Ansixinta & Gaarsiinta Qaab)
Xakamaynta Kharashka (Qiimaha Tooska ah iyo midka aan tooska ahayn)
Adeegga ugufiican (Adeegga Macaamiisha, Shaqaalaha & Alaab-qeybiyaha)
Nidaamka— U8 nidaamka maareynta ERP
Joogto-Xakamaynta Mashruuca Mashruuca
Jaangoynta - Nidaamka Qiimeynta Waxqabadka
Qaabab wanaagsan ayaa marka hore ku jira qaabeyn wanaagsan.
Iyadoo la baarayo iyada oo lala kaashanayo asxaabta gudaha iyo kuwa caalamiga ah, kooxdayada naqshadeynta kuma fiicna oo kaliya 2D, alaabada 3D iyo naqshadeynta caaryada laakiin sidoo kale waxay keenaan qiime aad u weyn sida "wax ku ool" iyo "miisaan fudud" sida ugu macquulsan ee macaamiisheena.
Kooxda nashqadeynta wax soosaarka: waxaan ka caawinaa macaamiisha dhanka B qaabeynta iyo falanqaynta suurtagalnimada. Naqshad la'aan ama aan lahayn, waxaan ku horumarin karnaa naqshadeynta alaabta iyada oo ku saleysan shuruudaha.
Kooxda CAE: samaynta cilmi baaris wadajir ah macaamiisheenna, sida falanqaynta rarka, falanqaynta xoogga, gaaska ama jilitaanka xumbada iwm.
Kooxda qaabeynta qaabka: ku tiirsanaanta waayo-aragnimada hodanka ah iyo softiweerka xirfadeed, waxaan si dhakhso leh uga jawaabi karnaa baahiyaha macaamiisha isla markaana abuuri karnaa naqshad fudud oo mashiin ah, fududahay in la isticmaalo, fududahay in la ilaaliyo, iyo badbaado in wax soo saar la sameeyo
■5 dhidibka kooxaha CNC: DMG oo ka socda Jarmalka, OKUMA iyo MAKINO oo ka yimid Japan, FIDIA oo ka timid Talyaaniga. Max.stroke waa 4000 × 2000 × 1100mm
■Kooxaha EDM: DAEHAN oo laba-dhammaatay iyo afar-dhammaad ah xarunta mashiinnada EDM ee ka socota Kuuriya. Max.stroke waa 3000 × 2000 × 1500mm
■Xarunta axdi qarameedka: Kuraki xarun caajis iyo qodista xarunta ka Japan. Qoto dheer Max. Jaraya waa 1100mm.
■Kooxaha CMM: WENZEL oo Jarmal ah, HEXAGON oo Iswidhan ah iyo COORD oo Talyaani ah. Max.measure stroke waa 2500 × 3300 × 1500mm.
■Kuwa kale: Qalabka baaritaanka dheelitirka SCHENCK ee ka yimid Jarmalka, qalabka baaritaanka qalbi adayga ee ka yimaada Mareykanka, mashiinka baaritaanka ow-rate, biyaha & mashiinka baaritaanka isku dhafan ee Haydarooliga.
■Kooxaha dhibcaha: ilaa 500T
■Mashiinnada duritaanka: Krauss maffei oo ka yimid Jarmalka, HAITIAN, YIZUMI. Dhaqdhaqaaqa isbarbar socda, isku haynta birlabta / hawo haynta, oo leh aaladda 5-dhidibka ah, foosto ret ee Mucell, illaa 3300T.
Hore: Qaybta Gawaarida
Caaryada baastada baaburka
Gawaarida gawaarida dambe
Caaryada albaabka gaariga
Qalabka gawaarida gawaarida gawaarida
Cinwaanka: No.301 Le Hua Road, Mold New Town, Xinqian, Huangyan, Taizhou, Zhejiang, 318020, PRChina.
Kaihua Mould's 2021 “Maareynta Dijital ...
Maarso 2-3, 2021, Kaihua Mold "Digital ...
Shirka Suuq geynta Labaad ee 2020 ...
8-da subaxnimo July 5, 2020, Kaihua Mould's 2 ...
2021.3.4 Yuan Chengmao, Guddoomiye Ku-xigeenka ...